Vaccine Tetanus Toxoid Adsorbed (မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေးရည်)) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Vaccine Tetanus Toxoid Adsorbed (မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေးရည်))
Vaccine Tetanus Toxoid Adsorbed (မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေးရည်)) ကဘာလဲ။
Generic Name: Vaccine Tetanus Toxoid Adsorbed (မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေးရည်)) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Vaccine Tetanus Toxoid Adsorbed (မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေးရည်)) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
မေးခိုင်ရောဂါပိုးကို တိုက်ထုတ်နိုင်သည့် ခုခံအားစနစ် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ထွက်ပေါ်လာစေရန်အတွက် Vaccine tetanus toxoid adsorbed ကို အများဆုံးအသုံးပြုကြပါသည်။
Vaccine Tetanus Toxoid Adsorbed (မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေးရည်)) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Vaccine tetanus toxoid adsorbed ကို ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းတွေမှာ ထိုးနိုင်ပါတယ်။Vaccine tetanus toxoid adsorbed ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မရှင်းလင်းတာတွေ ရှိခဲ့ရင် သင့်ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Vaccine Tetanus Toxoid Adsorbed (မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေးရည်)) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Vaccine tetanus toxoid adsorbed ကို ဆရာဝန်များကသာ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲ သိုလှောင်ထားရလေ့ ရှိပါသည်။သင့်အနေဖြင့် Vaccine tetanus toxoid adsorbed ကို အိမ်တွင် အသုံးပြုမည် သို့မဟုတ် အိမ်တွင် သိမ်းဆည်းထားရမည်ဆိုလျှင် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားလိုက်သည့်အတိုင်း အတိအကျ လိုက်နာရပါမည်။
Vaccine Tetanus Toxoid Adsorbed (မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေးရည်)) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အောက်ပါအချက်များရှိပါက ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
ဆေးများ သို့မဟုတ် သဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်မျာ၊အခြားအရာများနှင့် ဓာတ်မတည့်ခြင်းများရှိလျှင်။
tetanus toxoid adsorbed ကာကွယ်ဆေး၏ ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် ဓာတ်မတည့်ခြင်းများရှိလျှင် (မာကျူရီမှ ထုတ်လုပ်ထားပြီး ဆေးကို တာရှည်ခံအောင် ပြုလုပ်ပေးသော thimerosal သို့မဟုတ် latex ရာဘာလည်း ပါဝင်ပါသည်)။
သင့်အနေဖြင့် ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုသမှု သို့မဟုတ် ကင်ဆာဆေးသွင်းကုသမှုများ ခံယူနေရလျှင်။
tetanus toxoid adsorbed ကို အသက်ခုနှစ်နှစ်အောက် ကလေးများတွင် သတိကြီးစွာထားပြီး သုံးစွဲရပါမည်။အဆိုပါ အသက်အရွယ်အုပ်စုတွင် tetanus toxoid adsorbed ၏ အာနိသင်နှင့် စိတ်ချရမှုကို တိကျစွာ မသိရှိရသေးသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Vaccine Tetanus Toxoid Adsorbed (မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေးရည်)) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် C ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။
Vaccine Tetanus Toxoid Adsorbed (မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေးရည်)) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော်လည်း ၎င်းတို့ကို ကာလကြာရှည်စွာ ဆက်လက်ခံစားနေရခြင်း သို့မဟုတ် နေရထိုင်ရ ကသိကအောင့်ဖြစ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်ခံစားလာရပါက ဆရာဝန်ကို အသိပေးရပါမည်။
ဆေးထိုးထားသော နေရာ၌ နီရဲနာကျင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖောင်းလာခြင်း။
အောက်ဖော်ပြပါ ပြင်းထန်ဆိုးရွားသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ပေါ်ပေါက်လာပါက အရေးပေါ်ဆေးကုသမှုကို ချက်ချင်းခံယူရပါမည်။
ပါးစပ်၊မျက်နှာ၊နှုတ်ခမ်း သို့မဟုတ် လျှာတို့ ဖောင်းကားလာခြင်း။
ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ခံစားရမှုမှာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါက သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Vaccine Tetanus Toxoid Adsorbed (မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေးရည်)) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလဲ
Vaccine tetanus toxoid adsorbed ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓာတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓာတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်)
ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Vaccine Tetanus Toxoid Adsorbed (မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေးရည်)) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလား
Vaccine tetanus toxoid adsorbed က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓာတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓာတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Vaccine Tetanus Toxoid Adsorbed (မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေးရည်)) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလဲ
Vaccine tetanus toxoid adsorbed ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓာတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။အထူးသဖြင့်
သွေးခဲခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ရှိခြင်း။
အတက်ရောဂါ ဖြစ်ဖူးခြင်း စတဲ့အခြေအနေတွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Vaccine Tetanus Toxoid Adsorbed (မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေးရည်)) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ ၀.၅ စီစီကို အသားဆေးအဖြစ် ထိုးပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ၄ပတ် – ၈ ပတ် အကြာတွင် ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံထိုးရမည်ဖြစ်ကာ နောက်ထပ် ၆လ – ၁၂ လ အကြာတွင် တတိယအကြိမ် ထိုးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Booster : နောက်ထပ်ဆယ်နှစ်အကြာတွင် ၀.၅ စီစီကို အသားဆေးအဖြစ်ထိုးရမည်။
အခြားသော အသုံးပြုမှု ပုံစံများ
မေးခိုင်ရောဂါပိုးတမျိုးတည်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည် (ပုံမှန် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းအတွက် ဆုံဆို့၊ကြက်ညှာ၊မေးခိုင် သုံးမျိုးစပ် ကာကွယ်ဆေးကို ထိုးရမည်)။
ကလေးတွေအတွက် Vaccine Tetanus Toxoid Adsorbed (မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေးရည်)) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက် ၇နှစ်အောက်ကလေးများတွင် ကာကွယ်ဆေး၏ အာနိသင်ထိရောက်မှုနှင့် စိတ်ချရမှုတို့ကို သေချာစွာ သိရှိရခြင်း မရှိသေးပါ။
အသက် ၇နှစ်အထက် ကလေးများအတွက်
ပုံမှန် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းအတွက် ဆုံဆို့၊ကြက်ညှာ၊မေးခိုင် သုံးမျိုးစပ် ကာကွယ်ဆေးကို ထိုးရမည်။
Vaccine Tetanus Toxoid Adsorbed (မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေးရည်)) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
vaccine tetanus toxoid adsorbed ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ထိုးဆေး ၀.၅ စီစီ။
Vaccine tetanus toxoid adsorbed ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Vaccine tetanus toxoid adsorbed. http://reference.medscape.com/drug/tetanus-
toxoid-adsorbed- or-fluid- 343170#0. Accessed December 21, 2016
Vaccine tetanus toxoid adsorbed. https://www.drugs.com/cdi/tetanus-toxoid-
adsorbed-vaccine.html. Accessed December 21, 2016
Vaccine tetanus toxoid adsorbed. http://store.mcguff.com/products/2064.aspx.
ကလေးများတွင် အသက်ရှူ မွန်းကြပ်ခြင်း။ ကာကွယ်ခြင်းနှင့် အရေးပေါ် ကုသမှု